သက်တန့်ချို: Breaking Virus Alert !!
ဂျီတော့မှာ ဗိုင်းရပ်တစ်မျိုး ယခု ရက်ပိုင်း ကြောက်မက်ဖွယ်ပျံ့နှံ့လို့နေပါ တယ် ။ ဗိုင်းရပ်ရဲ့စာသားကတော့ OMG is this your picture? http://j.mp/x69ySs?d=a9a3a3 ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ သတိလက် လွတ် နှိပ်လိုက် ရင်တော့ ကိုယ့် စက်ထဲကို ဖိုင်တစ်ခု install လုပ်ဖို့ပြောပါတယ် ။ ကိုယ်က yes ကိုနှိပ်မိရင်တော့ အဲဒီစက်ကို လည်းကူးစက်သွားပြီး အဲဒီအကောင့်ကိုပါ ဗိုင်းရပ်ကူးသွားပါပြီ ။
Posted by သက်တန့်ချို at 6:13 PM
zp January 14, 2012 at 8:09 PM
925 January 14, 2012 at 10:01 PM
ဒေါက်တာ့ဆီက အဲဒီဗိုင်းရပ်နဲ့ ပါတ်သက်လို့တင်ထားတဲ့ပို့စ်ကို ပြန်ပြီး shareဖို့ ယူသွားပါတယ်ခင်ဗျာ...
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 15, 2012 at 1:22 AM
mo January 15, 2012 at 4:24 PM
facebook မှာ share ထားလိုက်ပါပြီ
Нellо, just ωanted to say, I enjοуed
this article. It was helpful. Keep on postіng!
Greеtings! Very helpful advice within this pοst!